စိတ်ဖိစီးမှု နဲ့ တွေ ကြုံတဲ့ အခါ . . . . .သင်ဘာလုပ်သလဲ ?? - MYSTERY ZILLION
စိတ်ဖိစီးမှု နဲ့ တွေ ကြုံတဲ့ အခါ . . . . .သင်ဘာလုပ်သလဲ ??
February 2011 edited March 2011 in My Article
ဒီ အကြောင်းလေး ရေးရတာ က အကြောင်းရှိပါတယ် . အကြောင်းရှိ တော့ အကျိုးရှိမယ် လို့ လဲ ထင်ပါတယ် . .
တစ်လောက ပဲ စိတ်ဖိစီးမှု ပြသနာ နဲ့ ပတ်သတ်လို့ အတော်လေး ဖတ်မှတ် လိုက်ရတော့ နည်းနည်း အာချောင်ချင်တာလဲ ပါတာပေါ့ .
သူသူကိုယ်ကိုယ် စိတ်ဖိစီးမှု နဲ့ ကြုံဖူးကြတဲ့ သူချည်းပါပဲ . . .
သူတို့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြသလဲ .
အလုပ်ရှင် ကခိုင်းတဲ့ အလုပ် ကို မလုပ်တတ်တာ နဲ့ အိမ်သာထဲ သွားသွား ငိုတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ရှိသလို . . .
အလုပ်ထဲ မှာ ဘာမှ အဆင်မပြေ လို့ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အခါ ရေချိုးခန်းထဲ မှာ စိန်အိုးစည် သီချင်းဆို ပြီး ကွေးနေအောင် က တတ် တဲ့ လုပ်ငန်းရှင် ကြီး တစ်ဦးလဲ အမှန်တကယ် ရှိပါတယ် . ( နာမည်ကြီး ပဲ ဗျ . သူ့ နည်းက တော်တော်မိုက်တယ် )
ကျွန်တော် က တော့ စိတ်အရမ်းညစ်ရင် သီချင်းနားထောင်ပါတယ် . နားထောင်တာမှ အေးဆေး နူးညံ့တာတွေ လို့ မထင်ပါနဲ့ .
မင်းအရိုးကို ချိုးလို့ အသွေးအသားကို အရက်နဲ့ ေ၇ာသောက်ပစ်မယ်လို့ အဓိပါယ်ရတဲ့ modern rock ကိုမှ နားထောင်ပစ်ပါတယ် .
အဲဒီ နည်းက မကောင်းပါဘူး တခါ ဒေါသတွေ မတရားထွက်လာလို့ မောက်စ်ကို ထုပစ်လိုက်တဲ့ အဆင့် ေ၇ာက်သွားပါတယ် .
ကိုယ့်လူ တို့ လဲ စိ်တ်ဖိစီးမှုနဲ့ ကြုံလာရင် ဘယ်လိုလုပ်သလဲ ပြောကြပါအုံး .
post တွေ များလာတော့ လဲ အိုင်တီ သမား နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေး ထုတ်လို့ ရတာပေါ့ ဗျာ
စိတ်ဖိစီးတာက အလုပ်ပိလာလို့ပါ အလုပ်ပိလာတာက သူ့ဟာသူအလုပ်တွေ များလွန်းလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ် နောက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အလုပ်ကိုအရွှေ့လွန်ရာကနေ Dead Line ကပ်လာလို့ပိတာလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ် :P အဲဒီတော့ အလုပ်သူ့ဟာသူ မနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လာတာကတော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ ကိုယ့်ဟာကိုအချိန်ဆွဲလွန်တာ မဖြစ်အောင်တော့ ကိုယ်တိုင်ပဲကရုစိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ကွန်ပျူတာအလုပ်က တစ်နေကုန်ထိုင်နေရတာများတော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားတစ်ခုတော့ လုပ်သင့်ပါတယ် ဒါလည်းစိတ်ဖိစီးမှု့ကိုလျှော့ချလို့ရပါတယ် ကွန်ပျူတာသမားကခက်တော့ခက်တယ် ကြယ်သီးနှစ်လုံး အလည်ကသွားကြားထိုးတန် တပ်ပြီးမရမယ့်အလေးတောင် အတော်များများက လေးတယ်ပြောမယ်ထင်တယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားကစားတစ်ခုကို အချိန်တစ်ခုပေးပြီးလုပ်ပါ ဒါမှသာကိုယ်အတွက် ရည်ရှည်ကောင်းမယ် မဟုတ်ရင်ထိုင်ရလွန်းလို့ ဗိုက်ကအရင်ထွက်လာတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်ဖိစီးမှု့ကခံရတာများလာတော့ သာမန်ထက်တော့ ခံနိုင်ရည်များပါတယ် စိတ်ဖိစီးမှု့များလာရင် လုပ်လေ့ရှိတာက အားကစားအလုပ်ကို အချိန်တိုးလိုက်ပါတယ် ဒါမှသာနေ့တိုင်း သတ်သတ်မှတ်မှတ် အလုပ်ကိုမေ့ထားချိန် ရသွားပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာ မန်နေဂျာကိုလက်သီးနဲ့ ထိုးချင်တာတွေကို အားကစားသင်တန်းမှာ ကိုယ်နဲ့လာကစားတဲ့လူတွေကို မန်နေဂျာအမှတ်နဲ့ ကိုင်ပေါက်လိုက်ပါတယ် :P သင်တန်းပြီးတော့ မန်နေဂျာလည်းဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက်ကြေ အဲလေကိုယ့်ဘော်တာတွေလည်း ကိုင်ပေါက်ခံရလွန်းလို့စိတ်ညစ်ကုန် ကိုယ်လည်းသူတို့ကိုင်ပေါက်တာ ခံရလို့ဖလက်ပြဆိုတဲ့အချိန် အလုပ်လည်းခေါင်းထဲက ဘယ်အချိန်ကထွက်သွားမှန်း မမှတ်မိတော့ပါဘူး
Off Topic: ကလူပျို တကွက်လောက်ပြပါလား။ တကယ်ကြည့်ချင်တာနော.... မိုက်ရင်သွားတက်မလို့....
အင်း ... စိတ်ညစ်ရင် အများအားဖြင့် က Inspirational songs လေးတွေနားထောင်ဖြစ်တာများတယ် .. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာသားလေးတွေပါတဲ့ သီချင်းလေးတွေပေါ့ ...
တခါတလေဘာမှလုပ်စရာမရှိရင်တော့ အိပ်လို်က်တယ် .. အဲဒါအကောင်းဆုံးပဲ ..
တခါတလေစိတ်ကူးပေါက်ရင် .. game ကစား တယ် .. ကိုယ်စိတ်တိုနေတာတွေကို game ထဲကရန်သူပေါ်ပေါက်ကွဲလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ ..
ကို emo ပြောသလို modern rock တွေနားထောင်မှတော့ဒေါသမပြေတဲ့အပြင် ပိုတောင်ဒေါသထွက်မိအုံးမယ် ..
ကိုလူပျိုက မန်နေဂျာကို ထိုးချင်တယ်လို့ ပြောတော့ . ကျွန်တော် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို သတိရပါတယ်
အလုပ်ရှင် ကို ကျောခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး မန်နေဂျာ ကို ကျောခိုင်းတာ ဆိုတဲ ့စာအုပ်ပါ .
တွေ့ ဘူး သမျှ အလုပ်ထဲ မှာ မန်နေဂျာ တွေ နဲ့ တော့ အဆင်ပြေပါတယ် . အပျိုကြီးတွေ ကိုး . . အဲ . ရာထူးတိုးလို့ တခြား အလုပ်ထဲ ရောက်တော့ လူပျိုကြီး တွေ နဲ့ တွေ့ ရော .
ဒါနဲ့ ကိုယ်လဲ မာဆက်ရောက်ရော ပေါ့ . သူနဲ့ မှ လိုက်မမာ ရင် ကိုယ့် မာမယ့် ပုံတွေ မြင်နေရတာကိုး .
အလုပ်ထဲ က လူပျိုကြီးတွေ ကို ပြောတာနော် . MZ က လူပျိုကြီး တော့ သွားမသွားမသိဘူး . အဟီး
စိတ်ညစ်ရင် တွေ့သမျှလူ လိုက်ရီပြတယ်။ မသိတဲ့သူရော သိတဲ့သူရော မြင်သမျှကို အကုန် ရီပြတယ်။
ပြီးတော့ ပေါက်ကရတွေ လျှောက်ပြောတယ်။ ငပေါ လို့ အထင်ခံရတဲ့ အထိလုပ်တယ်။ heeeee
အိမ်ရောက်မှ တွေ့ရာကိုင်ပေါက်ပြီး (တန်ဖိုးမရှိတာ၊ မပျက်စီးနိုင်တာတွေပါ) အော် ငိုတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ အိမ်က ဗီရို တော့ မှန် တစ်ခုမှ အကောင်းမရှိတော့ဘူး :cool:
ကျွန်တော်ကတော့ သီချင်းနားထောင်တယ် ပြီးတော့ အိပ်ချိန်ဆိုရင် အိပ်လိုက်တယ်။ စိတ်ရှုပ်လာရင် ဘာမှမလုပ်ချင်တာနဲ ့မလုပ်တော့ဘူး။ အမှားပါသွားမှာ စိုးလို ့။
စိတ်တိုလာရင်တော့ အိမ်ကနံရံကို ထိုးတယ်၊ ပြီးတော့ မကွဲတတ်တဲ့အရာကို ပစ်ပေါက်တတ်တယ်။ ကွဲတတ်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ ခေါင်းအုံးပေါ်ကိုပဲပစ်တယ်။
အနော် ကတော့ စိတ်ညစ်လာရင် သီချင်းနားထောင်တယ် ၊ အိပ်ပစ်လိုက်တယ်..
အလုပ်တွေပိလာရင် "ငါအားယားနေလို့ပါ" သီချင်းလေးပေါ့
အလုပ်ထဲမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့ အတွက်ညှိနိုင်းလို့မရခဲ့ရင် "တော်ပါပြီစိတ်ကုန်တယ်" သီချင်းလေးပေါ့
ပြောမရဆိုမရဒေါသကထွက်လာရင်တော့ "ငါမင်းကိုသတ်ချင်တယ်" သီချင်းလေးပေါ့ ....
တစ်ခါတလေအခန်းတံခါးပိတ် အသံကုန်ဖွင့်လူပါလိုက်ဟစ်လိုက် တော့ နည်းနည်းပေါ့ သွားတာ ပေါ့ စိတ်ပြေလောက်မှပြန်စဉ်းစားဘာဆက်လုပ်မလဲ အဖြေရှာအကြံဉာဏ်တောင်းသင့်တောင်ပေါ့ ... ပြေလည်သွားရင်တော့ ဒါတွေကခနတာပါ .... မပြေလည်ရင် အစကပြန်လုပ် looping ပြန်ပါတ် ပေတော့ ... ကျွန်တော့ကတော့ဒီလိုပဲလုပ်လိုက်တာပဲ ... တစ်ခါတလေ အလုပ်ထဲမှာ ပေါက်ကွဲချင်လာတယ် သီချင်းလဲဖွင့်မရဘူးဆိုရင်တော့ gtalk message အော်ပလိုက်တယ်အေးရော ... :mad:
အဖြေ အတော် များများ ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ သီချင်းနားထောင်ရင်း စိတ်ဖြေကြတဲ့ သူတွေ ကို တွေ့ ရပါတယ် .
အိုကေ . . နံပါတ်တစ် . အကြမ်းဖျင်းတော့ ရပြီ . စိတ်ဖိစီးမှုများရင် သီချင်းနားထောင်ပါ .
အဲ . ကျွန်တော့ လိုတော့ မော်ဒန်ရောခ့် တော့ နားမထောင်နဲ့ ပေါ့ဗျာ .
ကျွန်တော်လည်း စိတ်ဖိစိးမှုများရင် MetalCore တွေ နားထောင်ဖြစ်တာများတယ်
ကိုလိပ်က တော့ ဘယ်ခံစားချက်နဲ့ နားထောင်လဲ မသိပေမယ့် . . .
ကျွန်တော် က တော့ ခံစားချက်ရှိသဗျ .
သာမန်နားထောင်တဲ့ သူဆိုရင်တော့ နားညီးတယ် ပြောမှာပါပဲ .
အလေ့ အကျင့် ရသွားရင် တော့ မိုက်တယ်ဗျ . သူ အော်တာနဲ့ အတူ လိုက်အော်ရင် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ရတာ ကိုး . . .
ဒါမျိုးကျတော့ ဟစ်ဟော့ က မမိုက်ဘူး . . . သူ က အားအားရှိ သောက်တင်းချတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ များနေတာကိုး .
ငါ့လာမကျောနဲ့ ငါ့အပိုင်းထဲ ရောက်လာရင် အပိုင်းပိုင်းခုတ်ပစ်မယ် . နိုက်ကလပ်မှာ ကဲတဲ့ အကြောင်းတွေ ကတဲ့ အကြောင်းတွေ လဲများတယ် .
ကိုယ်က အဲဒီ အရွယ်ကို ကျော်ခဲ့ပြီလေ . ကလပ်မှာ ကဖို့ ဆိုတာ ဒီအသက်ဒီစိတ်နဲ့ ဘယ်လိုမှ မရွနိုင်တော့ပါ .
ဟစ်ဟော့ ကို ထိခိုက်ချင်း မဟုတ်ပါ . ကိုယ်တိုင် လဲ Jme ရဲ့ ဘ၀ ရဲ့ နိဗ္ဖာန်ကို နားထောင်နေဆဲပါ .
Customer က ဖုန်းဆက်ပြီး သူဖြစ်ချင်တာတွေ ပြော တဲ့ အခါ . ၊ အီးမေလ်းစစ်လိုက်တိုင်း Complain letter တွေ ချည်းတွေ့ရတဲ့ အခါ . တင်ထားတဲ့ proposal အပယ်ခံရတဲ့ အခါ .
Daugtry ရဲ့ သီချင်းလေး နဲ့ လိုက်ညညး်ပါတယ် . တော်တော် အခြေအနေ ဆိုးရင် တော့ 30 secs to mar ကို နားထောင်ပါတယ် .
ဘယ်လိုမှ မရရင်တော့ naruto သီချင်းလေး တွေ ဖွင့်တယ် . ကြည့်တယ် . . . .
မရရင် တော့ ရည်စားကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကွိုင်ရှာပါတယ် . ဟီးဟီး
ဆိုတဲ့ ကိစ္စပါပဲ (ပုံစံက တူနေတယ်ဗျာ...)
သူတို့ ဆိုက်လဲ vbulletin ဆိုတော့ ကိုယ်တို့ နဲ့ အတူတူပါပဲ . themes တူတာ ပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ကလိကလိ ဖြစ်ရပါတယ်
သူတို့က အဖွဲ့၀င် 16000 ကျော်တယ် ကိုယ်တို့ က 9000 ကျော်ထဲ .
post တွေ မှာ တော့ ကို်ယ်တို့ က များပါတယ်
နောက် သူတို့ က ကြော်ငြာ လက်ခံ ပါတယ် .
အဲဒီတော့ သူတို့ ဆီ မှာ MZ ကြော်ငြာ ထည့် ရင် ကောင်းမယ် လို့ ပေါက်ပေါက်၇ှာရှာတွေးမိသေးတယ် .
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် . သူတို့ ဟာတွေ က တော်တော်ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ် .
အရင် က အကြောင်းလေးတွေ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်လေးတွေ . နဲ့ တော်တော်ဖတ်လို့ ကောငး်ပါတယ်
ကျွန်တော် တို့ ကတော့ မိုင်းဗုံးနင်းပြီး ဟာသကား ကြည့်ရသလိုပါပဲ . နည်းနည်း သတိထားရတယ် .
အခန့်မသင့် ရင် အိုင်တီ နော်လစ်မရှိဘူးဆိုပြီး ကစ်တာ ခံရနိုင်ပါတယ်
တချို့ တော်တဲ့ စာရေးကောင်းတဲ့ member များ ၀င်မရေးတော့ တာ အဲဒါတွေ ကြောင့်ပါပါတယ်.
ထားပါတော့ အဲဒါတွေ မပြောတာကောင်းပါတယ် .
စေတန် ကတော့ မကြာခင် vanilla ဆိုတာ ပြောင်းမယ်လို့ ပြောပါတယ် .
ကျနော်ကတော့ စိတ်ရှုပ်လာရင် rock musics တွေနားထောင်တယ်။ ပြီးတော့ samurai warrior game ကစားတယ်။အဲ့ဒါမှဒေါသတွေ စိတ်ညစ်တာတွေပျောက်သွားတာ။ မကျေနပ်တာတွေကို game ထဲမှာ ဓားနဲ့ခုတ်ပစ်
ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တာလေ။ game ကစားတာနဲ့တင် ဒေါသမပြေသေးရင် တကယ်ဓားအစစ်ကိုင်ပြီးတော့အားကစားနဲဲနဲလေးလုပ်လိုက်တယ်။ အဲ့ချိန်မှာ ခုတ်ချင်တာလို်က်ခုတ်နေတာကိုး။ ဟီးးဟီးး လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်ကဘဲ
ခွေးကိုဆိုင်ကယ်နဲ့၀င်တိုက်ထားသေးတယ်။ လူလဲခုထိလှုပ်လို့မရသေးတော့ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာဘဲထိုင်နေရတယ်။ နောက်3ရက်ကျရင် network သွားချိတ်ရင်တောင်ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့လုပ်ရအုံးမှာ။ MZ ကညီအကိုမောင်
နှမတွေလဲကျနော့်လိုဒေါသမကြီးနဲ့နော်။ဒေါသကြီးရင် ကျန်းမာရေးထိခို်က်တယ်။တော်ကြာ ကွန်ပြူတာသမားမဖြစ်ဘဲ နှလုံးရောဂါသမားဖြစ်သွားမယ်။
ကျွန်တော်လည်း anime fan ပဲ။
ဒါဆိုရင် Anime Freakz ဇာတ်လမ်းပြန်ဆက်ရင်ကောင်းမယ်.
ကျနော်ကတော့ စိတ်ညစ်လာရင် စာအုပ်နဲ့ ဘောပင် ဆောင်ထားတယ် အကုန် ချရေးတယ် နောက်တစ်ခု စိတ်ညစ်တဲ့အခါ ရှိလာရင် ချရေးတယ် ရှေးက ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ဖတ်လိုက်တယ် အဲဒီ နည်းနဲ့ လုံးချာ လိုက်လိုက်ပါတယ်..... ကမ္ဘာလောကသားအားလုံး စိတ်ညစ်ခြင်းမှ ကင်းေ၀းကြပါစေ
ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်ဖိစီးလာရင် ကို emo လို အပြင်းစားသီချင်း တွေကို နားထောင်ပြီး မျက်လုံးပိတ်အိပ်လိုက်ပါတယ် အိပ်ပျော်ချင်ပျော်မပျော် နေပေါ့ နော့ :biggrin:
I love playing GAMES, like PES, Guitar Hero, and WOW.
PES က becomealegend ဆော့တယ် ဗျာ . GH က တော့ မတီးဖြစ်တာကြာပြီ . . disturb သီချင်းနဲ့တင် ဆက်မတီးတတ်တော့ ဘူးဗျ .
ကျွန်တော်လဲ BecomeaLegend ပဲ.. GH ကတော့ အားမှပါ. တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ တီးရတာ အရသာရှိတယ်လေ.. :P
ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုများလာရင် ခရီးသွားလာရတာကို ပိုကြိုက်ပါတယ် ... အလုပ်ကိစ္စတွေကိုမေ့ပြီး ခရီးသွားရတဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားပါတယ် ...အဲခရီးသွားဖို့ပိုက်ဆံမရှိရင်တော့ ညဘက် ကလပ်သွားပြီး ကလိုက်တယ် ... ကလပ်သွားဖို့လည်းပိုက်ပိုက်မရှိရင်တော့ သီချင်းနားထောင်ပါတယ် သီချင်းကတော့ modernrock ,gothic,emo,punk အကုန်နားထောင်ပါတယ် ။ များသောအားဖြင့်တော့ Avenged sevenfold ,Breaking Benjamin,Finger Eleven တို့နားထောင်ဖြစ်တာများတယ် ။ သီချင်းနားမထောင်ဖြစ်ရင်တော့ Movie,anime အကုန်ကြည့်တယ် အခုတစ်လောတော့ Naruto,Onepiece,Fairytail,Inuyasha နဲ့တစ်ပတ်တစ်ပတ် စိတ်ဖိစီးမှုတောင် ဘယ်ပျောက်နေလဲမသိတော့ဘူး .... :cool:
Naruto,Onepiece,Fairytail,Inuyasha နဲ့တစ်ပတ်တစ်ပတ် စိတ်ဖိစီးမှုတောင် ဘယ်ပျောက်နေလဲမသိတော့ဘူး ....
Ongoing ဖြစ်နေတာကတော့ ဆိုးတယ်.. :rolleyes::rolleyes:
Inuyasha က ongoing မဟုတ်ဘူးလေ .. ပြီးသွားတာကြာပြီ ..
Naruto နဲ့ One Piece ကိုပြောတာအစ်ကို ...
အဲဒါတော့ဟုတ်တယ် onepiece က မကြာခင် manga ကိုမှီတော့မယ် ..
အဲဒီ onepiece ကို မကြည့်ဖူးဘူး . . naruto နဲ့ ပဲ တိုင်ပတ်နေတာ .
onepiece က စျေးကြီးတယ် ဗျ . ရိုးရိုး ခိုးကူး လဲ မတွေ့ဘူး . ကိုယ့်လူတို့ ၀ယ်နေကျဆိုင်ရှိရင် လမ်းညွန်ကြပါအုံး ဗျာ .
naruto ကတော့ ဘယ်မှာ ၀ယ်၀ယ် ရပါတယ် onepiece သာခက်နေတာ . ပုံလေးတွေ က မိုက်တယ် ဗျ .
ဟီးဟီး အနော် ကတော့ သူများတွေနဲ့ စိတ်ညစ်ဖျောက်ပုံခြင်း မတူဘူးဂျ။ ဟီး
စိတ်ညစ်ရင် စိတ်ညစ်စရာကို အထပ်ထပ် ပြန်တွေးတယ်။ ပြန်တွေးပြီး ညစ်နေတာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ အဲဒီမှာ ဘယ်နေရာမှားပြီး ဘာလို့ လဲ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ပြန်မတွေးဘဲ မနေနိုင်ဘူး။ တခြား အရင်စဉ်းစားရမယ့် ကိစ္စပေါ်လာလို့ ခဏဆိုင်းထားရင်လည်း စဉ်းစားစရာရှိတယ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲ တေးထားပြီး နောက်ပြန်စဉ်းစားရော။ အဖြေတစ်ခုခု ရတဲ့အထိပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ အထပ်ထပ်စဉ်းစားရင်း အဖြေ တွေ အမျိုးမျိုးထွက်လာတတ်တယ်။
ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်း မတွေ့သေးတာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ တွေ့ပေမယ့် သိပ်ခက်ခဲတာမျိုးတို့ဆိုရင် ဘယ်သူမှ မရှိတဲ့နေရာမှ ဘာအကြောင်းမှ မစဉ်းစားဘဲ ကိုယ်သဘောကျတဲ့ ရှုခင်းတစ်ခုခုကို ငေးနေတာမျိုးရှိတတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့ လည်းဘာကိုမှ မတွေးဘဲ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဇွတ်စိတ်နှစ်ပြီး လုပ်ပလိုက်တယ်။
ဟီး သူများနဲ့မတူတာက သီချင်းနားထောင်လို့ စိတ်ညစ်ပျောက်တာမျိုးတော့ မဖြစ်ဖူးဘူး။ ညစ်နေရင် သီချင်းကို နားမထောင်ချင်တာ။ ဟီး။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ စိတ်ညစ်တုန်း ဂစ်တာတီးသံကို နားထောင်တာမျိုးတော့ နည်းနည်း စိတ်ညစ်တာ ခဏမေ့သွားတာမျိုးတော့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်ညစ်တာပါဘဲ။
အရင်ဆုံး လုပ်ဖြစ်တာတော့ နည်းနည်း စိတ်ရှုပ်လာပြီဆိုရင် ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်နေလိုက်တယ်။ အဲဒါဆို စိတ်က လွတ်လပ်ပြီး အတားအဆီးမရှိ အကျယ်ကြီး ပျံသန်းနိုင်သလိုဘဲ ခံစားရတယ်။
BAK က mmgamers ဆိုင်မှာ အလကားလာယူဗျာ .. external harddisk လေးတော့ယူလာပေါ့ ..
မောင်၀ိန်းက 480P သမား .. တားတားက 720P သမား. :rolleyes::rolleyes::biggrin::biggrin:
စိတ်ညစ်ရင်ရေချိုးပါတဲ့ ။ ဆရာတော် ရေ၀နွယ် ပြောတယ်လေ ။ သိချင်ရင်၀ယ်ဖတ်ကြည့်ပေါ့ ကျနော်တော့ မဖတ်ရသေးဘူးဂျ ဟီး :redface::redface::redface:
ကျနော်ကတော့ စိတ်ညစ်ရင် ထမင်းစားတယ် ဟင်းမကောင်းရင်တော့ ပိုစိတ်ညစ်တာပေါ့ ဟီး :redface::redface::redface: